भर्‍याङमाथि पूजा कोठा बनाउँदा डिप्रेसन हुन सक्ने, कहाँ कहाँ नबनाउने ? Canada Nepal
Oct 30 2020 | २०७७, कार्तिक १४गते
२०७७, कार्तिक १४गते
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका चार खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण
यो हो विश्वकै महँगो गितार, कति छ मूल्य ?
कोरोनाको महामारी बढेपछि फ्रान्समा फेरी लकडाउनको घोषणा
८ वर्षका बालकको विवाह ६१ वर्षकी महिलासँग गरिदिएपछि ...
पोखरामा बागलुङका कोरोना संक्रमित पुरुषको ज्यान गयो
विवाह गर्न नमानेपछि अभिनेत्रीमाथि चक्कु प्रहार
स्याङ्जामा एक युवकको ज्यान लिएको आरोपमा ४ जना समातिए
Copyright © 2020 All right reserved to Canada Nepal
भर्‍याङमाथि पूजा कोठा बनाउँदा डिप्रेसन हुन सक्ने, कहाँ कहाँ नबनाउने ?
ज्यो. सुरेश चन्द्र रिजाल आश्विन ९ २०७७
काठमाडौं । ब्रह्माण्ड प्रकृतिको एक सुन्दर रचना हो र सबै कुरा विश्वासको आधारमा अडिएको भनिन्छ । विश्वासलाई टिकाई राख्नको लागि मन्त्र अर्थात बोल्दा होस् पुर्‍याउने गरिन्छ ।
शुद्ध, पवित्र र सकारात्मक सोचबाट निस्किएको वाणी नै पवित्र मन्त्र हो र यही मन्त्ररुपी वाणीले हरेक क्षेत्रमाथि नियन्त्रणमा राख्न मुख्य भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ।
तसर्थ उपसनाको लागि सकारात्मक ऊर्जा आउने कोठा निर्माण गरेर हरेक दिन बिहान र बेलुका सकारात्मक तरङ्गलाई सकृय बनाईराख्न पुजा कोठाको निर्माण गर्दछाैँ ।
हामीले धेरै लगानी लगाएर घर निर्माण गर्दछौँ, सकेसम्मको सुविधायुक्त भवनको निर्माणमा गर्न लागिपरेका हुन्छौँ । त्यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेकै उक्त घरमा बस्दा कुनै पनि प्रकारको समस्या नपरोस् भन्नु नै हो ।
पछिल्लो समयमा घर ठूलो बनाउने तर मन्दिर बनाउँदा सानो र प्रयोगमा नआउने स्थानको छनोटमा पूजाकोठा पर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह हुने दिशामा यदि मन्दिर निर्माण गरियो भने सम्पूर्ण भवन भरि नै सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह हुन्छ र उक्त भवनमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण परिवारहरुको सुख, शान्ति, संवृद्धिका साथै सम्पूर्ण परिवारसँगको सम्बन्ध राम्रो हुने वास्तुविद्हरुले जानकारी गराएका छन् ।
पूजा कोठाको लागि सबैभन्दा उत्तम स्थानका रुपमा भवनको उत्तर, ईशानकोण ( उत्तर पूर्व कुना ) र पूर्व दिशामा बनाइएको पूजा कोठाले सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहदायक हुन्छ भने गलत दिशामा बनाइएको पूजा कोठाले सकारात्मक ऊर्जालाई नकारात्मक ऊर्जामा परिवर्तन गरि हरेक क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव राम्रो भन्दाभन्दा पनि नराम्रोमा परिणत गर्ने हुँदा पूजाकोठा निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाब दिएका छन् ।
पछिल्लो समयमा घरबनाउँदा भ¥याङमाथि पूजा कोठा बनाउने प्रचलन बढी देखिएको छ । वास्तुका हिसाबले उक्त स्थानमा पूजा कोठा बनाउँदा शुभ भन्दा पनि अशुभ फल धेरै हुने हुँदा नबनाउन नै सुझाब दिएका छन् ।
यदि बनाइसकेको भए भर्‍याङमा हुने वास्तुदोष कटाउने उपाय गर्नुपर्ने सुझाब दिएका छन् । भर्‍याङमा सबै मानिसहरुले टेकेर हिँड्नु पर्ने भएकाले सम्पूर्ण मानिसको नकारात्मक ऊर्जा पैतलाबाट फलाममा चुम्बकीय तरङ्गका माध्यमबाट पूजाकोठासम्म फैलने हुँदा अशुभ फल धेरै हुने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । भर्‍याङमाथि बनाइएको पूजाकोठाले बिहानको समयमा सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक ऊर्जाको प्रवाह हाम्रो शरीरमा पर्ने हुँदा मानसिक समस्या पैदा हुने र डिप्रेसनको समस्या देखापर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
यसबाट बच्नका लागि विशेष प्रकारको दैनिक पूजामा वास्तुपुरुषको छुट्टै कलश थापना गरि दैनिक वास्तुको मन्त्रद्वारा पूजा गरेमा केही नकारात्मक प्रवाह कम हुने जनाइएको । व्यवसायिक भवनमा उक्त स्थानमा मन्दिर हुँदा धेरै नै नकारात्मक हुने हुँदा व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्ने वास्तुविद्ले जानकारी गराएका छन् ।
(लेखक रिजाल वास्तुविद् हुन । उनी दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासंघ नेपालका महासचिव हुन् । उनको सम्पर्क नम्बर ९८५१०६११२४ र ईमेल [email protected] )
आश्विन ९, २०७७ शुक्रवार १८:४४:२७ बजे : प्रकाशित
ज्यो. सुरेश चन्द्र रिजाल
काठमाडौं - धनधान्य एवं सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजाराधनासहित रात्रिमा जाग्राम बसेपछि आजदेखि बडादशैँ समापन हुँदैछ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने कोजाग्रत पूर्णिमा आज साँझ सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजाराधना गरी रातभर जाग्राम बसेर मनाएसँगै दुर्गापक्ष सकिन्छ।
शास्त्रनुसार गर्नुपर्ने सबै बलिपूर्ति अर्थात् अखिल बलिपूर्तिको काम पनि आजै हुनेछ। अखिल बलिपूर्ति भएसँगै विजयादशमीदेखि शुरु भएको नवदुर्गाको प्रसादस्वरुप टीका र जमरा लगाई मान्यजनबाट आशीर्वाद लिने क्रम पनि आजैदेखि समाप्त हुन्छ। आजै जमरालाई नजीकको नदी, तलाउ, पोखरी आदि तीर्थस्थलमा लगी सेलाइन्छ।
आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि शुरु भएको दशैँपर्व नेपालीले आआफ्नो गच्छेअनुसार मनाउँछन्। आजको दिन सायंकालमा महालक्ष्मीको पूजाराधना गरी राति जाग्राम बसेको मानिसका घरमा पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिंँडेकी महालक्ष्मी प्रवेश गरी ऐश्वर्य दिई सम्पन्न बनाउँछिन् भन्ने धार्मिक विश्वासका आधारमा पर्व मनाउन शुरु गरिएकोे धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतम बताउछन्।
माता दुर्गाका तीन रुपमध्येका एक रुप महालक्ष्मीको पूजा गरेर आज दुर्गा पक्षलाई बिदा गरिन्छ। नवरात्र विजयादशमीकै दिन सकिने भए पनि दुर्गा पक्ष भने आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा समाप्त हुन्छ। लक्ष्मीपूजाको १५ दिनअघि महालक्ष्मीको आराधना गरिने भएकाले यस पर्वको विशेष महत्व छ। यस पूर्णिमालाई कौमुदी पनि भनिन्छ। आज राति जुवा खेल्ने विधानसमेत रहेको उनले बताए। महालक्ष्मीसँगै आज हात्तीमा चढेका इन्द्रको पनि पूजा गर्नुपर्छ।
कोजाग्रत पूर्णिमा आज परे पनि पूर्णिमा व्रत भने शनिबार रहेको जनाइएको छ। महालक्ष्मीको व्रत गर्न गरिने कर्म मध्यरातमा पूर्णिमा भएका दिन गरिन्छ। आज २७ घडी ५८ पला अर्थात् बेलुकी ५ः२५ बजेसम्म चतुर्दशी तिथि छ। त्यसपछि पूर्णिमा तिथि लाग्छ। मध्यरातमा पूर्णिमा आज परेकाले कोजाग्रत पूर्णिमा आजै मनाउने निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ । शनिबार पूर्णिमा तिथि ३३ घडी १६ पला अर्थात् बेलुकी ७ः३३ बजेसम्म छ।
चन्द्रमाको पूजा गरिने पूर्णिमा व्रतका लागि भने सूर्योदय र सायंकालमा पूर्णिमा तिथि चाहिने भएकाले शनिबार परेको हो। कार्तिक स्नान र आकाशदीपदान पनि शनिबारदेखि नै शुरु हुने छ। रासस
कार्तिक १४, २०७७ शुक्रवार ०७:२८:५८ बजे : प्रकाशित
# कोजाग्रत पूर्णिमा
५ यस्ता कार्य जसले बनाउँछ महापापी
काठमाडौँ। हिन्दु धर्मले मानव संस्कृति र सभ्यताको सबै पक्षलाई अँगालेको छ। अन्य धर्महरू जस्तो हिन्दु धर्मको कुनै एक संस्थापक, एकल धर्मशास्त्र र एकल सहमति जनाउने कुनै एक शिक्षाको पाठ नरहेको पाइन्छ। हिन्दु धर्मको विशालता र विषमताले यसको इतिहास र विकासको सन्दर्भमा अध्ययनकर्ता माथि ठुलो चुनौती प्रदान गर्ने गर्दछ।
हिन्दु धर्मले उदारताको परिचय दिने गर्दछ जसको अर्थ एउटा हिन्दु व्यक्तिले कुनै पनि देवी देवताको अनुसरण गर्न र कुनै पनि ग्रन्थलाई अपनाउन पाउँदछ जुन अन्य धर्ममा लागु भएको देखिँदैन। यद्यपि उदारताको परिचय दिए पनि हिन्दु धर्मशास्त्रमा केही कार्य गर्न भने वञ्चित गरिएको छ र यदि ती कार्य गरेमा उसलाई महापातक वा महापापी ठहर गरिने प्रचलन छ।
यी हुन् त्यस्ता कार्य
ब्रह्म हत्या : यसलाई सजिलो तरिकाले बुझ्दा एक ब्राह्मण जाती को हत्या भनेर बुजिन्छ तर यसले एक प्रकाण्ड विद्वान ब्राह्मणलाई जनाउँदछ जसले सम्पूर्ण वेद, शास्त्र, ग्रन्थ, पुराण आदी ज्ञानलाई नियन्त्रण गरी आफ्नो मस्तिष्कमा भण्डारण गरेको हुन्छ तसर्थ उसको हत्या भनेको ज्ञानको भण्डारलाई नष्ट गर्नु हो र यस्तो कार्य गर्नेलाई हिन्दु धर्मशास्त्र अनुसार महापापी भन्ने गरिन्छ ।
सुवर्णस्त्येन: संस्कृतमा सुवर्ण भन्नाले सुन र स्त्येंन भन्नाले चोरी हो। सामान्य भाषामा सुवर्णस्त्येन भन्नाले सुनको चोरी भनेर बुजिन्छ। त्यस्तै पुरातन समयमा सुनलाई एक बहुमूल्य र सामान्य रूपमा भविष्यको लगानीको रूपमा लिइन्थ्यो जुन आजको दिनसम्म लागु हुन्छ। हिन्दु शास्त्रका अनुसार कसैको सुन चोर्नु भनेको उसका सबै भावी खुसीहरूलाई नष्ट गर्नुका साथै उनीहरूको सबै मेहनत र बचतलाई चोर्नु हो, जसले मूल रूपमा केवल एक व्यक्तिलाई मात्र नभई पुरै परिवारलाई विस्थापित गर्न सक्ने भएकाले हिन्दु शास्त्रमा सुन चोर्नु भनेको महापाप गर्नु हो।
सुर पान: हिन्दु धर्मका देवी देवताले चढाउन एउटा विशेष पेय पदार्थ प्रयोग गरिने चलन जसलाई सोमरस वा सोमपान भन्ने गरिन्छ र यसको सेवनले चेतनालाई सर्वोच्च स्थानमा पुर्‍याउने गर्दछ। त्यस्तै ऋग्वेदमा सुर शब्दको पनि धेरै चोटि उल्लेख भएको पाइन्छ। सोम भन्नाले सत्य, समृद्धि र प्रकाश हो भने सुर भन्नाले असत्य, दुः ख र अन्धकार हो। हिन्दु धर्मशास्त्रमा एउटा ब्राह्मणलाई सुर पान यानिकी जाँड रक्सी पिउन शक्त निषेधित गरिएको छ। ब्राह्मणसङ ज्ञानको भण्डार हुने र उक्त पदार्थ सेवन गर्दा ज्ञानको दुरुपयोग हुने र समकालीन सन्दर्भमा यसले सबै प्रकारका हानिकारक लतहरू समावेश गर्दछ जस्तै रक्सी, लागू औषध, चुरोट खैनी, तम्भाखु, जुवा, तास आदि।
गुरुतल्पग: गुरुतल्पग अर्थात् गुरु को अर्धाङ्गिनी वा छोरी चेली तर्फ व्यभिचार भन्ने बुजिन्छ। वैदिक युगमा औपचारिक विद्यालय नभएका कारण शिक्षाको लागि एक मात्र स्थान गुरु-कुल थियो, अर्थात् गुरुको घर र विद्यार्थीहरू गुरुकै घर परिसरमा रही अध्ययन गर्ने गर्थे। त्यस्तै गुरुको परिसरमा रहँदा गुरुको श्रीमती वा छोरी चेलीलाई आफूतिर आकर्षण गर्नु ठुलो पाप मानिन्थ्यो र अझै मानिन्छ। हिन्दु धर्मशास्त्रमा गुरुलाई आदरणीय पात्र मानिन्छ, गुरुलाई एक असल शिक्षक, सल्लाहकार, पण्डित,नेतृत्वकर्ता वा नेता आदि हुन् । समकालीन अनुप्रयोगमा कुनै पनि शोषणपूर्ण यौन सम्बन्ध वा शक्तिको प्रयोग गरी निर्भर भएका बलात्कार वा रेप समावेश हुने गर्दछ ।
संसर्ग र भ्रूण हत्या : संसर्ग अर्थात् माथि उल्लेखित सबै कार्यमा साथ वा समावेश हुनु र त्यसमा मन्जुरी हुनु हो। आधुनिक परिप्रेक्षकमा यसको अर्थ त्यस्ता अपराधीहरूसँग सङ्गत गर्नु वा तिनीहरू हानिकारक व्यवहारमा समावेश हुनु। त्यस्तै हिन्दु धर्मशास्त्रमा भ्रूण हत्या पनि एक महापापको रूपमा मान्ने गरिन्छ। भ्रूण हत्या अर्थात् गर्भपात गराउनु वा शिशुको गर्भमै हत्या गर्नु हो।
कार्तिक १३, २०७७ बिहिवार १५:३८:२० बजे : प्रकाशित
# हिन्दु धर्म
भगवान पशुपतिनाथले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन्, हेर्नुहोस् आज २०७७ साल कात्तिक १३ गते बिहिबारको राशिफल
मेष राशि - मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । आफ्नो चार्तुयताले कार्य सम्पादन गर्दा सबैको चर्चा को बिषय भईन सकिनेछ । दाम्पति बिच सामान्य कलह रहने सम्भाबना रहन सक्छ । अन्य ब्यक्तिको पूर्ण बिश्वास नगर्नु होला । आर्थीक क्षेत्र मध्यम रहनेछ । यात्रा कारक समय रहेकोछ ।
बृष राशि - अधुराकार्य सम्पादनका निम्ती समय उत्तम रहनेछ । शारीरिक आलस्यताका कारण कार्यक्षेत्रमा अपजसको सम्भाबना रहनेछ । पारीवारका सदस्यहरु मध्ये कसैको स्वास्थमा समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । आय आर्जनको क्षेत्र मध्यम रहनेछ । जिबन साथीको सहयोगमा गरीएका ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य लाभ प्राप्त हुनेछ ।
मिथुन राशि - खानपानका क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु उत्तम रहनेछ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामान्य बादबिवादको झमेलामा फसिने सम्भाबना रहेकोछ । ब्यापार ब्यवसाय मध्यम रहला । साजेदारी काममा लगानी नगरैकै बेश हुनेछ । आफन्तजन बिचको भेटघाटले मन प्रशन्न रहला ।
कर्कट राशि - दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । ब्यापार ब्यवसायका निम्ती उत्तम समय रहेकोछ । मानसिक चन्चलताका कारण गरीरहेका कार्यमा सामान्य ढिलाईको सम्भाबना रहेकोछ । दाजु भाई तथा मित्र जनहरु सँगको सम्बन्ध टाढिन सक्छ । परीवारका कोहि सदस्यहरुको स्वास्थमा खराबी आउन सक्नेछ ।
सिंह राशि - स्वास्थको गडबढिका कारण सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । प्रतिपक्षीहरु सवल रहनाले कार्य सम्पादनमा झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । मित्रजनहरु सगँको भेटघाट पश्चात सामान्य यात्राको योग रहनेछ । शत्रु सबल रहनाले कुराकाट्ने ब्यक्तिहरुको बृद्धि हुनेछ । सामान्य आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला ।
कन्या राशि - अध्यन अध्यापनका निम्ती अधिक श्रम ब्यतित गर्नुपर्ने समय रहेकोछ । बौधिक ब्यत्तित्व हरुको साथ सहयोगमा आर्थिक क्षेत्र सवल बन्ने सम्भाबना रहेकोछ । नयाँ लगानिमा उत्तम समय रहेकोछ । मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । यात्रा फाईदा मुलक हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । निर्णय गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ ।
तुला राशि - भौतिक श्रोतसाधनका प्रयोगमा समय ब्यतित रहला । कार्यक्षेत्रको त्रुटिका कारण आत्मसम्मानमा ठेस पुग्न सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । ब्यापार ब्यवसायमा समय मध्यम रहनेछ । प्रेम सम्बन्धमा भने सामान्य झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला । स्वास्थ सम्बन्धी सामान्य समस्याले मनमा तनाब उत्पन्न गराउन सक्ला ।
बृश्चिक राशि - अधिक आत्मबिश्वास तथा घमडका कारण मित्रतथा दाजुभाई सगँको सम्बन्धमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । अरुको कार्यक्षेत्रमा भएको त्रुटिको अपजस तपाईले खेप्नु पर्नेछ । यात्रामा सामान्य चोटपटकको सम्भाबना रहेकोछ । मान्यजनको सहयोगमा गरीएका कार्यले दीगो फाईदा दिलाउनेछ ।
धनु राशि - खानपानको गडबढिका कारण स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । नयाँलगानिका क्षेत्रमा सजग रहनु उत्तम रहनेछ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । शारीरिक आलस्यातले गर्दा गरीरहेको कामको क्षेत्रमा अपजस सहनु पर्ला । खानपानमा बिशेष ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ ।
मकर राशि - अपरीचित ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपरेकै बेश रहनेछ । मित्रजनहरुको सहयोगमा अधुरा कार्य सम्पादन हुनेछन । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहन सक्छ । आटँ शाहसको कमीले कार्यमा ब्यबधान आउला । प्रतिपक्क्षी सबल रहनाले तपाईलाई आफ्नु कमजोरीको महसुस हुनेछ ।
कुम्भ राशि - नजीकका ब्यत्तित्वहरुबाट धोका हुनाले कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । झुटा आरोपको सम्भाबना रहेकोछ । स्वास्थ क्षेत्रको समस्या जटिल बन्ने योग रहेकोछ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ बिशेष ध्यान दिनु होला । अरुको कुरामा बिशेष ध्यान नदिनु होला ।
मिन राशि - भोजभतेर जन्य कार्यमा सहभागीताको योग बन्नेछ । पुराना मित्रजन सगँको भेटघाटले मन हर्षित रहला । बिद्या तथा सन्तान शुख प्राप्ति हुने योग रहेकोछ । आय आर्जनमा बृद्यि गर्नका लागि तपाईले बढी परीश्रम गर्नु पर्न सक्छ । बौधिक क्षेत्रको बिकाशले तपाईको मान सम्मानमा बृद्यि गर्नेछ ।ज्यो.प.सरोज घिमिरे
कार्तिक १३, २०७७ बिहिवार ०७:१७:०५ बजे : प्रकाशित
भद्रकाली माताले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन्, हेर्नुहोस् आज २०७७ साल कात्तिक १२ गते बुधबारको राशिफल
मेष राशि - मनोरञ्जनको क्षेत्रमा समय र धन खर्चनु पर्नेछ । सकरात्मक सोचको कारण सामुहिक दाहित्व हात लाग्नेछ । जिबन साथिको सहयोगले अचल सम्पति प्राप्तिको योग रहेको छ । मित्र सगँको अति सामिप्यता कष्टकर रहला । स्वास्थ सम्बन्धी सामान्य समस्याले मनमा तनाब उत्पन्न गराउन सक्ला ।
बृष राशि - अप्रत्यासित मित्रजन सगँको भेटले मन प्रफुल्लीत रहनेछ । नयाँ कार्यको थालनिलाई नयाँ योजनाको आवश्यक पन्र्न सक्ला । पारीवारिक साथ सहयोगले आम्दानि बृद्धि हुनेछ । अरुको कुरा सुन्ने बानिले झन्झट आईपर्ला । यात्रामा सामान्य चोटपटकको सम्भाबना रहेकोछ । मान्यजनको सहयोगमा गरीएका कार्यले दीगो फाईदा दिलाउनेछ ।
मीथुन राशि - आर्थीक समस्याबाट बच्न सकरात्मक सोचको आबश्यक पर्न सक्ला । परीस्थीतिसगँ जुध्ने क्षमतामा बृद्धि हुनाले कार्य सफल रहनेछ । परिवारको सहयोगले बौधिक तथा आर्थीक बिकासको बाटो फेला पर्ने छ । शारीरिक आलस्यातले गर्दा गरीरहेको कामको क्षेत्रमा अपजस सहनु पर्ला । खानपानमा बिशेष ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ ।
कर्कट राशि - अगाडि सारेका व्यक्तीद्वारा सम्पादित कार्यहरु बिफल हुनाले अपजस खेप्नुपर्ला । मित्रजनसँगको अधिक निकटताको कारण भाग्योदयमा बाधा तथा अनावश्यक खर्च उत्पन्न हुनेछ । परीवारमा बिताएको समय फाईदा जनक रहला । प्रतिपक्क्षी सबल रहनाले तपाईलाई आफ्नु कमजोरीको महसुस हुनेछ ।
सिंह राशि - मान्यजनको स्वास्थमा देखिएको खराबिले मानसिक तनाब उत्पन्न गराउला । मित्रजनको यथेष्ट सहयोग द्वारा आम्दानिका नँया स्रोत फेला पर्नेछन । लापरबाहिले धनमालको क्षति ब्यर्होनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ बिशेष ध्यान दिनु होला । अरुको कुरामा बिशेष ध्यान नदिनु होला ।
कन्या राशि - हतासमा गरिएको निर्णयको कारण दाम्पत्य जिवनमा खटपट उत्पन्न हुन सक्नेछ । प्राकृतीक स्रोत साधनको परिचालनबाट यथेष्ट लाभ उठाउन कुटुम्बको सहयोग आवश्यक रहनेछ । बिद्या तथा सन्तान शुख प्राप्ति हुने योग रहेकोछ । आय आर्जनमा बृद्यि गर्नका लागि तपाईले बढी परीश्रम गर्नु पर्न सक्छ ।
तुला राशि - तपाईको परोपकारी भाबनाको फाईदा अरुले उठाउनाले तपाई कमजोर रहनु हुनेछ । अगाडि सारेका व्यक्तीद्वारा सम्पादित कार्यहरु बिफल हुनेछन । अर्काको खुसिको लागी अनावश्यक समय र धन ब्यय गर्नु पर्नेछ । आफ्नो चार्तुयताले कार्य सम्पादन गर्दा सबैको चर्चा को बिषय भईन सकिनेछ ।
बृश्चिक राशि - स्थान परीबर्तनले मानसिक तबरमा समस्या आईपर्न सक्ला । आफु भन्दा सानाको सहयोगले गरीएका कार्यहरु फाईदा जनक रहनेछ । नयाँ कार्यको थालनिले मनमा उमंग छाउनेछ । सन्तानको स्वास्थमा आएको असरमा बृद्धि हुनेछ । शारीरिक आलस्यताका कारण कार्यक्षेत्रमा अपजसको सम्भाबना रहनेछ ।
धनु राशि - मनोरञ्जनको क्षेत्रमा समय ब्यतित गर्नु पर्ने दिन रहेको छ । सामान्य कार्यको निम्ति ज्यादा परीश्रम र समय खर्च हुनेछ । आफ्नो कला कौशलता को प्रयोगले अरुको मन जित्न सफल रहिनेछ । हतासमा निर्णय नगरैकै बेश हुनेछ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
मकर राशि - सामान्य परिस्थति बिकराल बन्नाले प्रिय ब्यक्ति हरु सगँ को सम्बन्ध टाढिएला । जिबन साथिको खराब स्वास्थले कार्यक्षेत्र प्रभाबित रहन सक्नेछ । नेत्रृत्व गर्ने क्षमतामा बृद्धि तथा नेत्रृत्व गर्ने समय प्राप्त हुनेछ । मानसिक चन्चलताका कारण गरीरहेका कार्यमा सामान्य ढिलाईको सम्भाबना रहेकोछ ।
कुम्भ राशि - मान्यजनको पुर्ण सहयोगले कार्य सहज बन्ने छ । अपरीपक्क कार्यले सामान्य खर्च बढाउन सक्नेछ । खानपानमा बिषेश ध्यान दिनु होला । परीस्थीति सगँ जुध्नसक्ने क्षमताको खाचो महसुस हुनेछ । प्रतिपक्षीहरु सवल रहनाले कार्य सम्पादनमा झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामान्य आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला ।
मिन राशि - कार्यको बेवास्ताले मान्यजनलाई ठेश पुग्नेछ । पारीवारिक सरसल्लाहाबाट अगाढि बढाइएको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । हतारमा गरिएको निर्णयले पछि पछुताउनु पर्ने हुनाले सचेत रहि अघि बढ्नु होला । बौधिक ब्यत्तित्व हरुको साथ सहयोगमा आर्थिक क्षेत्र सवल बन्ने सम्भाबना रहेकोछ । नयाँ लगानिमा उत्तम समय रहेकोछ ।ज्यो.प.सरोज घिमिरे
कार्तिक १२, २०७७ बुधवार ०७:२४:५८ बजे : प्रकाशित
गणेश भगवानले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन्, हेर्नुहोस् आज २०७७ साल कात्तिक ११ गते मंगलबारको राशिफल
मेष राशि - साजेदारी कार्यमा बिशेष सजग रहनु होला । नयाँ कार्यको थालनि गर्न राम्रो समय रहेको छ । आफुभन्दा सानाको सहयोगमा मनग्य लाभ प्राप्त हुनेछ । बोलिको प्रभाव बढ्नाले ईष्ट मित्रको साथ मिल्नेछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा अधुराकार्य हरु सम्पादित रहनेछन । कला कौशलका क्षेत्रमा खर्चिएको समय उत्तम रहनेछ ।
बृष राशि - सम्पादित कार्यहरुका क्षेत्रमा सामान्य झन्झट आई पर्नेछ । मान्यजन तथा पारिवारीक साथसहयोगमा केहि दुरताको सामना गर्नु पर्ला । भौतिक साधनको प्रयोगमा बिशेष ध्यान दिनु राम्रो रहनेछ । बिद्या तथा बौधिक क्षेत्रमा भने राम्रो समय रहेको छ । सामाजिक कार्यमा जुट्ने समय रहेकोछ । सवारि साधनको प्रयोमा ध्यान पूर्याउनु होला ।
मीथुन राशि - कामकाजको क्षेत्रमा भने बिशेष सजग रहनु होला अपजसआईपर्ने योग रहेको छ । नसोचेका क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुनाले मनमा खिन्नता पैदा हुनेछ । आटँ र शाहसमा बृद्धि भएता पनि साथिभाई हरु टाडिएको अनुभव हुन सक्ला । मनोरञ्जन मुलक यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । अपरीचित ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपरेकै बेश रहनेछ ।
कर्कट राशि - बोलिको गलत अर्थ लाग्न सक्ला तसर्थ वाणीमा ध्यान दिनुहोला । संचित रकम खर्च हुन सक्नेछ । खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुहोला । सामान्य चोट पटक वा स्वास्थ सम्बन्धी समस्याको सामना गनुपर्नछ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामान्य बादबिवादको झमेलामा फसिने सम्भाबना रहेकोछ ।
सिंह राशि - ब्यापार ब्यवसायमा सामान्य समस्या देखा पर्न सक्नेछ । खुट्टा तान्ने ब्यक्ति हरुको बृद्धि हुनाले कार्यसम्पादनमा बिशेष होसियार हुनु पर्ने छ । निर्णय गर्ने क्षमतामा कमि आउने छ । खानपानमा रुचि जाग्नेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । तपाईको सरल मिजासले मित्रजनहरु आकर्शित हुने योग रहेको छ ।
कन्या राशि - खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ । सामान्य कार्यको निम्ति धेरै समय र परीश्रम खर्चनु पनेछ । आर्थिक अभाबको सामन गर्नु पर्ला । मनमा सामान्य चिन्ताले बास गर्नेछ । खानपानको गडबढिका कारण सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । कार्य क्षेत्रमा अरुको दबाबको महसुस हुनेछ । सामान्य आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला ।
तुला राशि - तपाईको कार्य कुशलताले अरु ब्यक्तिलाई मोहित बनाउन सक्छ । पठनपाठनको क्षेत्रमा समय मध्यम रहेको छ । आम्दानिका स्रोतहरु फेला पर्नाले मनमा उत्साहा छाउनेछ । अरुको भर पर्नाले सामान्य झन्झट ब्यर्होनु पर्ला । आफुभन्दा सानाको सहयोगमा मनग्य लाभ प्राप्त हुनेछ । बोलिको प्रभाव बढ्नाले ईष्ट मित्रको साथ मिल्नेछ ।
बृश्चिक राशि - सबारी साधनको प्रयोगमा बिशेष ध्यान दिनु होला । सभासम्मेलनमा सहभागि हुन सक्ने योग रहेको छ । मानसम्मान प्राप्तिको सम्भाबना रहेको छ । ब्यापार ब्यवसायमा समय राम्रो रहेको छ । आम्दानि मध्यम रहला । बिद्या तथा बौधिक क्षेत्रमा भने राम्रो समय रहेको छ । सबारी साधनको प्रयोगमा बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्नेछ ।
धनु राशि - आटँ शाहसमा बृद्यि हुनाले तपाईका बिपक्क्षीहरु कमजोर रहनेछन । सामान्य यात्रा हुनसक्ला । मित्र तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । श्रम र परीश्रमको राम्रो कदर हुने योग रहेको छ । नसोचेका क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुनाले मनमा खिन्नता पैदा हुनेछ । आटँ र शाहसमा बृद्धि भएता पनि साथिभाई हरु टाडिएको अनुभव हुन सक्ला ।
मकर राशि - खानपानको क्षेत्रमा बिशेष ध्यान दिनु होला । आजको लगानि भोलिका निम्ति फाईदा जनक हुनेछ । अरुको भर पर्दा कार्यक्षेत्रमा सामान्य अप्जसआउनसक्छ । सामान्य चोट पटक वा स्वास्थ सम्बन्धी समस्याको सामना गनुपर्नछ । नजिकका मित्रजनहरुको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । अरुको बिश्वासमा नपर्नुनै उत्तम रहनेछ ।
कुम्भ राशि - मानसिक चन्चलताले गर्दा कार्य दिगो नरहन सक्छ । पारीबारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ । तपाईको कार्यको फाईदा अरुले सहजै लिन सक्नेछन । तपाईको सरल मिजासले मित्रजनहरु आकर्शित हुने योग रहेको छ । अधुराकार्य सम्पादनका निम्ती समय उत्तम रहनेछ । शारीरिक आलस्यताका कारण कार्यक्षेत्रमा अपजसको सम्भाबना रहनेछ ।
मिन राशि - अरुको बिश्वास गर्नाले धोका हुन सक्छ । खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ । पारीबारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ । स्वास्थमा सामान्य समस्या आउन सक्छ । तात्कालिन आर्थीक अभाबको सामना गर्नुपर्नेछ । नजीकका ब्यत्तित्वहरुबाट धोका हुनाले कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ ।ज्यो.प.सरोज घिमिरे
कार्तिक ११, २०७७ मंगलवार ०७:२५:३५ बजे : प्रकाशित
आज दशैँको मुख्य दिन विजयादशमीः उत्तम साइत १०: १९ बजे
काठमाडौँ - दुर्गापक्षको मुख्य दिन आज विजयादशमी मान्यजनको हातबाट नवदुर्गाको प्रसादका रुपमा शुभ साइतको प्रतीक रातो टीका एवं समृद्धिको प्रतीक जमरा लगाएर मनाइँदैछ । घटस्थापनाका दिन स्थापना गरिएको घडाबाट अभिषेक गरी विजयादशमीको टीका लगाइन्छ ।
आश्विन शुक्ल दशमीका दिनमा मनाइने विजयादशमी पर्व आज हर्षोल्लासका साथ मान्यजनबाट दुर्गाभवानीको प्रसादस्वरुप टीका र जमरा थापेर मनाइन्छ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले आज देवी विसर्जनको साइत बिहान १०ः११ बजे रहेको जनाएको छ ।
टीकाप्रसाद ग्रहण गर्न साइत खोज्नेका लागि भने १०ः१९ बजे उत्तम रहेको समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले राससलाई जानकारी दिनुभयो । विजयादशमी आफैंँमा शुभ दिन भएकाले आज टीका लगाउन सामान्य मानिसले साइत खोज्नु नपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । “राज्य सञ्चालकले भने साइतमै टीका लगाउनुपर्छ, राज्य सञ्चालकले शुभसाइतमा टीका लगाउँदा प्रभु, मन्त्र र उत्साहशक्ति प्राप्त हुने शास्त्रीय वचन रहेकाले साइत दिइएको हो, साइतमै टीका लगाउँदा देवीको शक्ति प्राप्त हुन्छ” धर्मशास्त्रविद् प्रा डा गौतमले भन्नुभयो ।
लगाइमाग्ने पश्चिम, लगाइदिने पूर्व फर्कनुपर्ने
आज विजयादशमीको दिन चन्द्रमा कुम्भ राशिमा रहेकाले टीका लगाइमाग्ने मानिस पश्चिम फर्कनुपर्छ । टीका लगाइदिनेले भने पूर्व फर्केर बस्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता छ । चन्द्रमालाई दाहिने र सम्मुख पार्दा शुभ हुने भएकाले यसो गर्नुपर्ने अध्यक्ष गौतमले सुनाउनुभयो ।
आजदेखि पूर्णिमासम्म मान्यजनबाट दुर्गाको प्रसादका रुपमा टीका ग्रहण गर्दा अन्य फूलका साथै घटस्थापनाका दिनमा वैदिक विधिपूर्वक राखिएको पहेँलो जमरालाई समृद्धिको प्रतीकको रुप मानी लगाइन्छ । जमराले विभिन्न रोगव्याधिमा औषधिको रुपमा काम गर्ने तथ्य वैज्ञानिकरुपमा समेत पुष्टि भइसकेको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिरहेकाले जमराको रस सेवन गर्नाले रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि हुने आयुर्वेदका चिकित्सकको भनाइ छ ।
घटस्थापनामा स्थापना गरिएको पूर्ण कलशको जलबाट अभिषेक गरेपछि वर्षभर शान्ति हुने भएकाले आज मान्यजनबाट टीका र प्रसाद लगाउनुअघि अभिषेक गर्ने गरिएको हो । असत्यमाथि सत्य र आसुरीशक्तिमाथि दैवीशक्तिको विजयको प्रतीकका रुपमा मनाइने विजयादशमी बडादशँैंकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण दिन हो ।
सत्ययुगमा देवीले महिषासुर र त्रेता युगमा रामले असत्यको प्रतीक रावणमाथि आजकै दिन विजय प्राप्त गरेकाले त्यही समयदेखि विजयादशमी मनाउन शुरु गरिएको धार्मिक विश्वास छ । आजकै दिन मौर्यसम्राट् अशोकले शस्त्रास्त्र परित्याग गरेकाले बौद्धहरु शस्त्रपरित्याग दिवस मनाउँछन् । गुरु पुरोहित, हजुरबा, हजुरआमा, बा, आमा, मान्यजन तथा ठूलाबडाका हातबाट नवदुर्गाभवानीको टीका, जमरा तथा प्रसाद थापी यश, ऐश्वर्य वृद्धि, काम गर्ने क्षमतामा वृद्धि एवं दीर्घायु प्राप्त होस् भनी आशीर्वाद लिइन्छ ।
विजयादशमीमा टीका लगाइदिँदा यस्ता मन्त्रले आशीर्वाद दिने गरिन्छ–
आयुद्रोणसुते श्रियं दशरथे शत्रुक्षयं राघवे ।
ऐश्वर्यं नहुषे गतिश्च पवने मानं च दुर्योधने ।।
शौर्यं शान्तनवे बलं हलधरे दानं च कुन्तीसुते ।
विज्ञानं विदुरे भवतु भवतां कीर्तिश्च नारायणे ।।
यो मन्त्र विशेषगरी पुरुषलाई टीका लगाउँदा आशीर्वाद दिन भनिन्छ । महिलालाई भने दुर्गादेवीको स्वरुप मानेर आशीर्वाद दिइन्छः
जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी ।
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते ।।
आजदेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म मान्यजनबाट दुर्गाको प्रसादस्वरुप टीका, जमरा र आशीर्वाद थाप्न हिंँड्ने मानिसको बाटामा भीड लाग्ने गरे पनि यस वर्ष कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण सुरक्षित हुनुपर्नेछ । मान्यजनसँग आशीर्वाद लिन जाँदा तिनैलाई जोखिममा नपार्ने गरी सचेतता अपनाउन समितिले आह्वान गरेको छ ।
तुलजा भवानी यात्रा
महानवमीका अवसरमा आइतबार हनुमानढोकास्थित तलेजु भवानी मन्दिर कोरोनाको त्रासका कारण नखुले पनि भौतिक दूरी कायम गरी सोमबार तुलजा भवानी यात्रा भने गरिने जनाइएको छ । तलेजु भवानीको मन्दिर वर्षमा एक दिन मात्र महानवमीका दिन खोल्ने प्रचलन थियो ।
समितिले दिएको साइतमा बिहान ८ ः ४७ बजे भवानी यात्रा शुरु गरिनेछ । भवानीलाई स्थिरासन भने बिहान ९ः४९ बजे नै गरिनेछ । यसैगरी खड्गयात्रा पनि सोमबार नै गरिने जनाइएको छ ।रासस
कार्तिक १०, २०७७ सोमवार ०६:०२:३८ बजे : प्रकाशित